Posted by သက်တန့်ချို at 3:19 PM
ဆောင်းနှင်းရွက် November 27, 2009 at 4:05 PM
စိတ်တော့ ၀င်စားပါရဲ့ ..
စားချင်လို့တော့ ဟုတ်ပါဘူးးး ..
ကြောက် .. ကြောက် ...
တစ်ခုခု ဖြစ်သွားရင် ဘယ်လို လုပ်မလဲ ဟင် ...
ဒဏ္ဍာရီ November 27, 2009 at 4:32 PM
ကြံကြံဖန်ဖန်နော် စိတ်ကူးကလည်း ကောင်းလိုက်တာ။ သွားတော့ မသွားရဲဘူး ကြည့်ရတာ အသည်းယားတယ်။ မတော်ပြုတ်ကျမှဖြင့် မစားရလည်း နေပါစေတော့ မောင်လေးရယ်..။း)
ကိုမျိုး (အညာမြေ) November 27, 2009 at 5:34 PM
အင်း... လမ်းခုလတ်ရောက်မှ အိမ်သာတက်ချင်နေရင် ဒုက္ခ။ သွားတော့ သွားချင်သားဗျ။ ဘယ်မှာရှိတာလဲ မသိဘူးနော်... အကိုသွားမယ်ဆိုရင် လက်တို့လိုက်အုံး..ကျနော်လဲ လိုက်မယ်... :)
Unknown November 27, 2009 at 6:10 PM
Ohh..interesting places...Let's go together....!!
~ဏီလင်းညို~ November 27, 2009 at 6:38 PM
စားသောက်ဆိုင်မှာတော့ ဘာတွေအလကားကျွေးသလဲမသိဘူးနော်...။ စိတ်တော့ဝင်စားစရာပဲဗျ...။ ဒါပေမယ့် သွားရမှာတော့ ကျောချမ်းစရာဂျီး...ဟီးးးးးးးးးးး
လသာည November 27, 2009 at 6:49 PM
အစ်မတော့ အမြင့်ကြောက်ရောဂါရှိတယ်။ ဓါတ်ပုံကြည့်ရုံတင် လန့်နေတာ။
စွန့်စားတတ်သူအတွက်တော့ တော်တော်လေး စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းမယ်နော်။
Welcome November 27, 2009 at 9:14 PM
ဘယ်နေရာမှာ ရှိပါသလဲ ... ??
ကိုချစ်ဖေ November 27, 2009 at 9:25 PM
အဲ့ဒီဆိုင်မှာတခုခုစားမှ အသက်ရှင်တော့မယ်ဆိုရင်တော့လည်း သွားရမှာပေါ့ ဝေ့ စားသောက်ဆိုင်ကလည်း ဖရီးဆိုတော့ ကိုချစ်ဖေ ပြန်မဆင်းတော့ဘူး.တောင်ထိပ်မှာပဲနေတော့မယ်
ဓါတ်ပုံထဲတောင် လန့်နေတာ အဲ့ဒီစားသောက်ဆိုင်အခင်းအကျင်း နဲ့ အပြန်လမ်းကကော ဒီတလမ်းပဲလား.သိလိုလှသဗျာ
ဖြစ်နိုင်ရင် ရေးပါဦး သွားကြတဲ့သူတွေလည်းများမယ်ထင်ပါရဲ့..
Khyl November 27, 2009 at 9:52 PM
ဆိုင်ကလူတွေ ဆန်ဆီတွေကို ဘလိုသယ်လဲ မသိဘူးနော်.... အသားငါးတွေ လတ်ကောလတ်ဆတ်ရဲ့လား မသိ... ဟားဟား... လျှောက်တွေးတာပါ... စိတ်မဆိုးပါနဲ့ခည....
ကောင်းကင်ပြာ November 27, 2009 at 11:48 PM
မလိုက်ပါရစေနဲ့ တော်...ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ပြန်လာရင် ပါဆယ်လေး ဆွဲခဲ့ ဘာတွေ ကျွေးလဲ သိရအောင်..း)
Unknown November 28, 2009 at 4:46 AM
maylay November 28, 2009 at 10:03 AM
ကြည့်ရတာနဲ့တင် ခြေဖဝါးအေးလိုက်တာနော်။ နှလုံးလည်း ကောင်းဘူး။ လှည့်ပြန်တာပဲကောင်းပါတယ်အေ....။ မောင်လေးပြန်လာရင်သာ အစ်မတွက် ပါဆယ်ထုပ်ခဲ့ချေ။ နေဦး။။။ အဲ့မှာ ပင်လယ်စာ ရပါ့မလား။ မတော် ကုန်းကုတင်သားချည်းပဲ ချက်ကျွေးနေမှဖြင့်။။။။ဟဟ ပေါက်ပေါက်ရှာရှာ ကောင်လေးရေ .... အင်းနော် ဟိုမှာ ရီဝေဝေဖြစ်အောင် စားသောက်ပြီး၇င် ဝ ဘီလို ပြန်ဆင်းရမယ် ဝ နားမီလယ်ဘူးရယ်။ ဟဟား
ရွှေရတုမှတ်တမ်း November 28, 2009 at 1:12 PM
ကျောပိုးအိတ် November 28, 2009 at 2:04 PM
PhyoPhyo November 28, 2009 at 4:18 PM
ကြောက် ......................... စရာကြီး .. စားတော့ဘူး ..
ကိုလူထွေး November 29, 2009 at 3:27 AM
အစားတလုပ်အတွက် ဒုက္ခက မသေးပါလား ကိုယ့်လူရယ်...
သွားတဲ့နေရာလေးတွေကို ဓာတ်ပုံလေးတွေ ရိုက်ပြီး ပိုစ့်ရေးကြတဲ့ ဘလော့ဂါများအတွက်တော့ ရှယ်ပဲ။ အေးလေ ရောက်အောင်သွားပြီး ရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံလေးတွေပဲ ကြည့်တော့မယ်။
မန်းလေးသား May 16, 2012 at 12:28 PM
ဘယ်နေရာ ဘယ်နိုင်ငံမှာလဲခင်ဗျာ......... ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားပါတယ်.... ကျွန်တော်သွားပေးမယ်လေ....... အဲ လမ်းစရိတ်တော့ ပါဆယ်ထုပ် ပေးစေချင်တဲ့သူတွေက စပွန်စာပေါ့နော်.......ဟိဟိ
eipie December 2, 2012 at 11:49 AM
ခံစားလို့မပြောပြနိုင်တဲ့ ဆွဲတောင်မှုကတော့တော်တော်ကလေးကို ရှိပါတယ် စိတ်ကူးကောင်းကောင်းလေးတွေရှိပါလားနော် စိတ်အပန်းဖြေတဲ့အနေနဲ့ တခေါက်လောက်တော့သွားကြည့်ချင်ပါတယ်ဒါကလည်းလက်တွေ့ဘ၀တခုလို့မြင်မိတယ်လေ မဆုတ်မနစ်ကြိုးစားရင်ပန်တိုင်ဆိုတာ ရှိစမြဲပါလားနော် စားသောက်ဆိုင်လေးကဘ၀ရဲ့ပန်းတိုင်းလေးပါလားနော် ဘာပဲကျွေးကျွေးဘာနဲ့မှမလဲနိုင်တဲ့ခံစားမှုကို ဘယ်အရာနဲ့မှနိုင်ယှဉ်ပြလို့မရနိုင်ဘူးလို့ထင်မိပါတယ် ------
ရောက်အောင်သွားချင်ပါသေးသည်----ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့် ဒီဓါတ်ပုံကလေးများဖြင့် ဘ၀တိုက်ပွဲအနိုင်နွဲ့လိုက်ပါဦးမည်